Who is Printing Zimbabwe's Bond Notes? - allAfrica.com
It's still not clear where Zimbabwe's new bond notes were printed, and Vice President Emmerson Mnangagwa has told parliament that the Robert Mugabe-led government won't disclose the location.
Zimbabwe: Govt Won't Disclose Where Bond Notes Are Printed - Report
News24Wire, 2 December 2016
Zimbabwe's deputy president Emmerson Mnangagwa has reportedly refused to disclose where the newly introduced surrogate currency known as "bond notes" is being printed. Read more »
Zimbabwe: Bond Notes 'Aren't Meeting Cash Demand' - Zim Fin Minister
News24Wire, 1 December 2016
Zimbabwe's finance minister Patrick Chinamasa says he knows that brand-new "bond notes" aren't meeting the demand for cash, a newspaper reported on Thursday. Read more »
Zimbabwe Braces for The Worst as Bond Notes Finally Out
The Reserve Bank of Zimbabwe has introduced the bond notes despite strong resistance from citizens. The authorities view the bond notes as a way of putting an end to the ongoing ... Read more »
Zimbabwe: 'They Want to Sweep All the U.S. Dollars From the Streets'
Zimbabwe: Bond Notes Finally Out